LUSUKA EKHASINI LOKUQALA | News24
LUSUKA EKHASINI LOKUQALA
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaEnye yezindlu ehluknyezwe imvula.
AMALUNGA omphakathi wase-Ashdown athi izindlu zawo ziphenduke indawo yokubhukuda ngoMsombuluko ebusuku ngenxa yezimvula ezinamandla ebezikhona.
Imindeni ethinteke kakhulu ilezi zigameko ileyo ehlala emgwaqeni uDabulamanzi kanye no-ZJ Chonco.
Bathe seku kaningi bebika lenkinga kumasipala uMsunduzi ukuthi bacela ukulungiselwa ukuze amanzi ezohamba kahle kodwa akwenzweki.
UNkk Busisiwe Ngcobo (66) uthe yena usebhekane naleninga kusuka ngonyaka wezi-2012. Uthe njalo uma ngabe kuyihlobo bayazi ukuth ibazoba nenkinga yokungenelwa amanzi endlini.
“Besisazihlalele sibuka umabonakude ngesikhathi sizwa amanzi abeza ngamandla esuka phezulu emgwaqeni sawabona esezongena endlini. Lawo manzi abengahambi wodwa kodwa abehmabisana nendle ebeyikhukhuleka iphuma kulezi zitamukoko ezingasebenzi. Bekukhona ngisho inhlabathi ebeyisuka emgwaqeni lapho umasipala wafika wamba khona umgodi omkhului esingawazi waqede washiya kanjalo,” kubeka yena.